Warshadaha Shiinaha iyo Waxsoosaarka Dabaqeedka Neefsiga Shiinaha ShiningPlast
Maadaama dhismaheena u baahan yahay inuu neefsado. Markaa waxa loo baahan yahay waxyaabo badan oo dhismo ah in la siiyo hantida neefsashada si looga hortago waxyeelada qoyaan dheeraadka ah ama qoyaan gudaha ah.
Miisaanka Wejiga: 80-200gsm
Qalabka: SBPP + lakabka Porous
Ballac: (3.3ft ~ 5 ft) 1-1.5 mitir
Dhererka isugeynta: 50m (16)) ~ 100m (328)) ama La Sameeyay
Awoodda Tamarta: 90-350N (heerka caadiga ah)
Daabacaadda: 1-4 midab ayaa la heli karaa
Wadamo badan oo reer Yurub ah ayaa qaatay wakhti dheer sanbabka neefsashada. Taasoo u oggolaaneysa huurka dheeriga ah inuu baxo, sidoo kalena ka hortagto inay biyuhu galaan.
Dheecaan-biyo-mareenka waxaa lagu soo saaraa iyadoo la raacayo qaabkan si loo hubiyo in uumiga biyuhu si hagaagsan uga baxsado. Membrane-ka Neefta lagu Wareejinayo ee ShiningPlast sidoo kale ma ahan hydrophilic si looga hortago in biyuhu soo galaan.
Dheecaanka Mindhicirka ee Neef-gureedka ShiningPlast wuxuu sidoo kale waari karaa oo adkeyn karaa sababtoo ah dharka waxaa sameeya lakabyada isku-dhafan.
·Xoog iyo waara
Dheecaanka Mindhicirka ee Neef-gureedka ShiningPlast wuxuu sidoo kale waari karaa oo adkeyn karaa sababtoo ah dharka waxaa sameeya lakabyada isku-dhafan. Waxaan fahamsanahay in cimri dheereynta iyo caddeynta jeexitaanka ay yihiin qodobo muhiim u ah xididdada inta lagu gudajiro.
Lakabyada SBPP maaddaama qaab dhismeedka ugu weyn hoos u dhigo culeyska guud si weyn. Aad bay u fududahay in la qaado.
·Cimilo u adkaysata
Mashiinka saqafka neefsiga ee loo yaqaan 'ShiningPlast' ee hawada ku neefsashadu waa mid aan biyuhu ku xirnayn oo adag marka lagu jiro cimilada xun. Daaweynta UV weyn, waxay ka ilaalin doontaa saqafkaaga inta lagu jiro dhismaha ama dabayl aad u weyn.
Neefsashada culus (Qiimaha SD ee hooseeya)
Sida sanado waayo-aragnimo wax soo saar aan-tolmo lahayn iyo horumar. Waxaan u soo saareynaa si fudud maahan neefsashada laakiin si weyn u neefsanaya. Waxaan leenahay tijaabooyinkeena WVT oo caddeeya neefsashada inay gaaraan qiimo aad u sarreeya (Qiimaha SD ee hooseeya)
Hore: 2-Qaybta Ply House
Xiga: Duub Guriga Sare Nugul